Toherin’ny Fanjakana ny Tsanganandahatsoratry ny Blaogera iray · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Oktobra 2018 15:08 GMT
Manodina ny marina avokoa ny fomba fijerin'i mr brown momba ireo olana ireo. Resabe omena endrika fanadihadiana, hiampangàna ny Fanjakana amin'ny zavatra rehetra tsy mahafaly azy. Tsy manolotra na safidy na vahaolana izy. Efa nokajiana mba handrisika ny fiahianìhiana sy ny fahakiviana ny lahatsoratra soratany, izay tsy manao afatsy ny vao mainka manaratsy ny toe-javatra, fa tsy manatsara, ho an'ireo lazainy fa mampitsetra azy.
Mahatsapa i Singaporeangle fa tokony ho malefaka kokoa ny feon'ilay valinteny
Na dia tsy izany aza no fikasany, toa manambara ny fahatsapana an'ilay valinteny fa tsy vonona ny handray tsikera ny governemanta, indrindra raha tsy tsara izany. Tokony hanolotra tsikera ahafahana manatsara zavatra sy vahaolana solony ho an'ireo olana noresahina isika fa mety hiteraka olana ho an'ireo olontsotra ilay izy, na ho an'ny mpanao gazety toa an'i M. Brown aza, izay matetika tsy manana ny vaovao ampy tsara sy ilaina mba hanaovana izany.
Nilaza ihany koa ilay taratasy fanoherana
Raha toa ka milaza ny tenany ho mpanara-maso tsy manana fironana politika ny mpanoratra an-gazety iray, rehefa manararaotra ny fahafahany miditra amin'ireo haino aman-jery mba hanohintohinana ny fijoron'ny fanjakana manoloana ny fitambaran'ny mpifidy, tsy mpitsikera mpanatsara zavatra intsony no anarany fa mpisehatra politika manana fironana.
Manontany momba ity filazana an'i mr.brown hoe manararaotra ny fahafahany eo amin'ny haino aman-jery nentim-paharazana ity i Ridzal
Avoaka ao amin'ny sokajy Feo ao anatin'ilay gazety ny tsanganandahatsoratr'i mr brown, sokajy atokana ho an'ny fanehoankevitra, eritreritra ary zava-manahirana ireo mpanoratra, ary koa ny an'ny mpamaky izay, raha misafidy ny manoratra ao amin'ilay gazety, dia tena manana fahafahana miditra amin'ny haino aman-jery toa an'i mr brown ihany koa. Noho izany, tsy hitako hoe ahoana no ahafahana milaza fa nanararaotra ny toerany amin'ny maha-mpanoratra tsanganandahatsoratra i mr.brown mba hitarihana, na amin'ny fomba inona na amin'ny fomba inona, ny hevitry ny olona mankany amin'ny fanjakana.
Heverin'ilay blaogera Heavenly Sword fa diso fandray ny tsanganandahatsoratra nosoratan'i Mr. Brown ireo manampahefana ary miezaka ny mandika ny zavatra tena noresahin'i mr brown.
Tsy nahagaga ahy na izany aza ilay valintenin'ny MICA. (Mihevitra fa gaga ve ianao?) 🙂 Hitako eto ny fiavian'izany ary ekeko am-panajana ny zavatra lazainy. Fa ny tanjon'ity lahatsoratra fohy ity dia ny manasongadina fa diso ny fandraisan'ny MICA ilay lahatsoratra voalohany nosoratan'i M. Brown, izay miteraka valinteny mafy be ho ana Singaporeana tena tsy manantsiny.
Nipoaka tamin'ny fanehoankevitra maro sy fanohanana ho an'ilay blaogera ny tontolon'ny blaogy Singaporeana, izay ahitana ity lahatsary fanomezamboninahitra ity, nalaina avy tamin'ny sarimihetsika iray tao Hong Kong.